Xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliya oo la dhaarinayo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaXildhibaanada labada aqal ee Soomaaliya oo la dhaarinayo
December 27, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Munaasabada dhaarta oo ka dhacaysa xarunta ciidanka booliiska ee Janaraal Kaahiye. [Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah la filayaa in la dhaariyo.
Baarlamaanka cusub ayaa munaasabada dhaarintoodu waxay ka dhacaysaa xarunta ciidanka booliiska ee Janaraal Kaahiye ee Muqdisho, waxaana la filayaa in ay ka qeybgalaan masuuliyiinta dowladda federaalka iyo qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya.
Xubnaha labada aqal ayaa la filayaa in 28-bisha Janaayo ee sanadka 2017-ka ee soo socda ay dooran doonaan madaxweynaha dalka, sida qorshuhu yahay.
May 17, 2017 Ugu yaraan labo askari oo katirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku geeriyooday qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay labo gaari oo isku dhacay gudaha magaalada Garoowe, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka iyo dadka deegaanka. Shilka ayaa dhacay markii booyad biyood iyo gaari kale ay [...]